La Sexta nanova ny sary famantarana: Marina sa tsia? | Famoronana an-tserasera
Ny tambajotram-pahitalavitra Espaniôla dia nanova ny endriny orinasa noho ny azy tsingerintaona fahafolo izay niteraka resabe: Misy ny mahatakatra azy ho dingana mandroso amin'ny fanamafisana ny mombamomba azy sy ny fomban'izy ireo, na dia ny sasany aza dia mihevitra azy ho hadalana izay hifanohitra amin'ny sarin'izy ireo. Araka ny fantatrao, ity rojo ity dia rojo jeneraly ao amin'ny vondrona Atresmedia ary zavatra iray izay te-hanoritra ny endriny vaovao amin'ny alàlan'ny fampifanarahana tonika mirindra kokoa amin'ireo mpikambana hafa toa ny Antena 3 na Neox. Ho an'ity, vahaolana fisaka sy géometrika no nampiasaina, izay lasa taona vitsivitsy lasa tsotra kokoa.
Ny valiny farany dia ny fihenan'ny rafitra noforonin'ny cubes namboarina teo amin'ny aloky ny 6 ary izany dia mamorona gradient an'ny loko maitso avy amin'ny vahaolana maivana mankany amin'ny farany maizimaizina ary manafaka antsika enina avy any ambadika maintso izay manome bebe kokoa fanatrehana mafy ilay foto-kevitra. Ho an'ny anaran'ny rojo dia nampiasainay ny typeface slab, Botona.
Raha ny loko no jerena maitso dia mijanona ho ilay mpandray anjara tsy azo iadian-kevitra na dia ankehitriny aza ireo feo manga izay manohina ny mainty dia misy fanatrehana lehibe kokoa hanasongadinana ireo loko maitso. Etsy ambany no ahitanao ny fivoarany sy horonan-tsary aseho ny mombamomba ilay rojo. Izaho manokana dia mihevitra fa safidy nahomby tokoa io, ahoana ny hevitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » La Sexta nanova ny sary famantarana: Marina sa tsia?
Sary placeholder Alberto Escudero dia hoy izy:
Eny, tsy tiako ny fanovana. Nanamora ny endrika izy ireo ary nanakaiky kokoa ny fomba polygonal izay manana ny haino aman-jery kanto haino aman-jery. Raha hametraka snag dia tiako kokoa ny font San serif.
Valiny tamin'i Alberto Escudero